256GB amin'ny microSD kalitao, izany no atolotry Lexar | Vaovao momba ny gadget
256GB amin'ny microSD misy kalitao, izany no atolotry Lexar
Ny karatra MicroSD dia efa ela lasa fenitra fitahirizana amin'ny ambaratonga rehetra. Raha ny marina dia mbola tadidiko ireo andro izay efa niavaka ny fananana microSD 512MB. Na izany aza, mandeha ny fotoana ary mitombo mafy ny teknolojia, izany no hitantsika, ohatra, eo am-pelatanan'ny Lexar, izay nanolotra karatra microSD manaitra natao ho an'ireo mpampiasa be fangatahana indrindra ary afaka manolotra hatramin'ny 256GB fitehirizana tanteraka. Andao hojerentsika hoe inona avy ireo toetra mampiavaka an'ity karatra kely misy fahaiza-manao lehibe ity.
Ity karatra microSD ity dia manolotra haingam-pandeha hatramin'ny 150 MB / s ary hafainganam-pandeha hatramin'ny 90 MB / s, tsy data adala izy ireo, saingy tsy ratsy velively raha raisinay ny fitehirizana rehetra aterak'izy ireo, noho izany hitantsika a microSD UHS-II U3 ​​miaraka amin'ny teknolojia SDXC. Raha fintinina, ny tombo-kase fiantohana rehetra tokony hananan'ny karatra fitehirizana amin'ny sehatra matihanina ary ho azo omena ny serivisin'izy ireo mandritra ny volana aprily amin'ity taona ity.
Ny tanjona dia ny hampiasa azy roa hanoratana horonantsary amin'ny kalitao 4K sy horonantsary manana fahaiza-manao 3D. Mba hanomezana hevitra antsika dia afaka mitahiry vitsivitsy isika 36 ora amin'ny horonantsary 4K, manodidina ny 58.100 hira na 67.600 sary tsara kalitao. Dingana lehibe raha ampitahaina amin'ny karatra fitahirizana 128GB.
Ho fanomezana dia hanolotra kopian'ny Fanavotana sary, fisintomana rakitra iray, mba hahafahan'ny matihanina mampiasa indray ny atiny nofafany tsy nahy. Fanampiny tsara rehefa mividy an'ity karatra ity, na dia tonga tsara izao aza ny zavatra tsara, ny fotoana hanambarana ny vidiny, manodidina 350 euro izay ahazoantsika maka io karatra io, na mividy fitaovana finday afovoany izahay ary miaraka aminy miaraka amin'ny karatra microSD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » 256GB amin'ny microSD misy kalitao, izany no atolotry Lexar
Snapchat Spectacles: solomaso mahatalanjona izay tsy hampiasainao firy
Ny Twitter dia miady amin'ny SPAM sy "kaonty atody" amin'ny fanavaozana farany azy